विचित्र विश्व – ehalkhabar
Home > विचित्र विश्व
विश्वबाट लोप हुँदैछ यो भाषा : यो भाषा बोल्ने जम्मा ३ जना मात्र बाँकी
Raju Kaphle ८ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०८:५७ May 22, 2018 विचित्र विश्व	0
जेठ ८ । विश्वमा कयौँ प्रकारका भाषाहरु बोलिन्छन् । अलग–अलग देशमा अलग–अलग भाषाहरु बोलिन्छ जो आफैँमा एक अनौठो इतिहास बोकेका हुन्छन् । जसमध्ये विश्वको एक कुुनामा एक यस्तो भाषा बोलिन्छ जसको नाम हो ‘बदेशी’ । यो भाषा पाकिस्तानको पहाडी गाउँमा बोलिने गर्दछ तर अहिले यो भाषा लोप हुने अवस्थामा छ या
के तपाईंलाई थाहा छ ? लामखुट्टे जम्मा २४ घण्टा मात्र जीवित रहन सक्छ !
Raju Kaphle ४ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार ११:२० May 22, 2018 विचित्र विश्व	0
जेठ ४ । विश्वमा यस्तो कयौँ अजब गजब जानकारीहरु छन् जो हरेक व्यक्ति जान्न र पढ्न चाहन्छ । किनभने यसको माध्यमबाट कम समयमा धेरै जानकारीहरु हासिल गर्न सकिन्छ जो महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । आउनुुहोस् जानौँ केही महत्वपूर्ण र रोचक जानकारीहरु । १) मह एक यस्तो खाने चिज हो जुन कहिल्यै पनि
सडक दुर्घटनामा ‘ब्रेक’ लगाउन यी युवकले बनाए चमत्कारिक उपकरण
Raju Kaphle २९ बैशाख २०७५, शनिबार ०९:५५ May 14, 2018 विचित्र विश्व	0
वैशाख २९ । नेपाल लगायत विश्वमा हरेक वर्ष लाखौं मानिस सडक दुर्घटनाका शिकार हुने गर्छन् । भारतको सुल्तानपुर जिल्लाका १२ कक्षामा पढ्दै गरेका एक युवकले यस्तो चमत्कारिक उपकरण बनाए कि कार सडक दुर्घटनामा कमी ल्याउन मद्दत गर्दछ । सडक दुर्घटनाबाट बच्न कार चलाउने चालकले सीट बेल्ट बाँध्नुपर्छ त्यस्तै कारको ढोका समेत
बच्चामा यो गुण छ भने पढाईमा हुन्छन् अब्बल !
Raju Kaphle २१ बैशाख २०७५, शुक्रबार ०३:१९ May 8, 2018 विचित्र विश्व, शिक्षा/स्वास्थ्य	0
वैशाख २१ । तपाईंलाई यो कुरा थाहा छैन होला कि बच्चामा एउटा यस्तो गुुण पाइन्छ जसका कारण उसले स्कुलमा राम्रो पढ्नका लागि प्रोत्साहित गर्दछ । तपाईं पनि आफ्नो बच्चाको यो गुणलाई नियाल्नुस् । यस्ता बच्चाहरु स्कुलमा सधैं पढाई गर्नमा उत्सुक रहन्छन् तथा उनीहरुले राम्रो नम्बर समेत ल्याउँछन् । अमेरिकाका एक वैज्ञानिकले
६५ वर्षसम्म जवान रहन्छन् यहाँका महिला : जानौं उनीहरुको रहस्य
Raju Kaphle १७ बैशाख २०७५, सोमबार ०४:५७ May 1, 2018 विचित्र विश्व	0
वैशाख १७ । दुनियाँमा एउटा यस्तो प्रजाति छ जहाँका महिलाहरु ६५ वर्षसम्म जवान रहन्छन् यानि ६५ वर्षसम्म बच्चा जन्माउन सक्छन् । यी महिलाहरु यति राम्रा हुन्छन् कि यिनीहरु कुनै पृथ्वीका होइन स्वर्गबाट आएका अप्सराहरु हुन् । उत्तरी पाकिस्तानको पहाडमा बस्ने यो प्रजातिको संख्या ८७ हजारको आसपास छ । यो प्रजाति यसकारण पनि
Rajendra Kaphle १७ चैत्र २०७४, शनिबार ०३:३८ March 31, 2018 विचित्र विश्व	0
काठमाडौँ १७ चैत्र मानिसहरुले मोवाइलाई बहुउपयोगी साधानका रुपमा प्रयोग गदै आएका छन् । महंगा मोवाइल प्रयोग गर्ने एक प्रकारको फेसन नै बन्दै छ । मोवाइलमा फोन नम्बर मात्रै नभएर अविस्मरणीय पल पनि राखिएका हुन्छन् जुन हाम्रो जिन्दगीका कतिपय यादगार दिनहरुको बारेमा अविस्मरणीय फोटो, भिडियोहरु रहन्छन् । तपाईको मोवाइल हरायो एकतर्फ पैसाको
Raju Kaphle १५ चैत्र २०७४, बिहीबार ०४:२३ March 29, 2018 अन्तर्राष्ट्रिय, विचित्र विश्व	0
चैत्र १५ । सबैलाई चासोको विषय हुन्छ कि धेरै धनी मानिसका छोराछोरीले आफ्ना मातापिताबाट पकेट खर्च कति पाउँछन् होला ? भारतका सबैभन्दा धनी मुकेश अम्बानीका छोराछोरीले पाउने पकेट खर्च हेर्दा सबैको होस उड्न सक्छ । आईडीआईभीएलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा मुकेशकी पत्नी नीता अम्बानीले बताएकी छिन् कि जब उनका छोराछोरी स्कुल जान्थे
Raju Kaphle ६ चैत्र २०७४, मंगलवार ०३:५६ March 20, 2018 विचित्र विश्व	0
चैत्र ६ । विश्वमै पहिलोपटक नागरिकता पाएको रोबोट रोफियालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)ले आयोजना गरेको कन्फेरेन्स अन टेक्नोलाजी फर पब्लिक सर्भिसका लागि बुधबार नेपाल ल्याउन लागिएको हो । सोफिया नाम दिइएको यो रोबोट हङकङको ह्यान्सन रोबटिक्सले बनाएको हो । सन् २०१५ मा टिक्टभ गरिएको यो रोबोटलाई २०१६ को मार्चमा पहिलो
Raju Kaphle ३ चैत्र २०७४, शनिबार ०३:५१ March 17, 2018 विचित्र विश्व	0
चैत्र ३ । तपाईंले खाना खाने थाल वा प्लेटको रंगले तपाईंको स्वास्थ्यको निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । वैज्ञानिकहरुको एक अनुसन्धानले यो कुराको पुष्टि गरेको छ जुन कुनै पनि डाक्टरले बताउन सक्दैन । वैज्ञानिकहरुले मानिसमा हुने मोटोपनालाई उसले खाना खाने प्लेटको रंगले असर पार्ने खुलासा गरेका हुन् । धेरै मानिसले खाना खाँदा प्लेटको
Raju Kaphle २५ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार ०३:२३ March 9, 2018 मुख्य समाचार, विचित्र विश्व	0
फागुन २५ । हुन त अहिलेसम्म पृथ्वीमा रोबोटले कब्जा गरिसकेको छैन तर कुनै–कुनै रोबोटको हर्कतले भने मानिसलाई चिन्ताग्रस्त बनाइदिएको छ । एक अमेरिकी नागरिकले दावी गरेका छन् कि जब उ आफ्नो ओछ्यानमा सुुतिरहेको थियो तब रोबोटले ठूलो–ठूलो स्वरमा हाँस्दै भन्यो – यो राम्रो मौका हो । किन म आज राति
पुुुरुषाेत्तम महिनाभरि गोसाइकुण्डमा मेला
नेकपाद्वारा केन्द्रीय कमिटीको पूर्णता
२ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतलाई अमेरिका जान रोकियो
अपडेट : मुम्बईविरुद्ध सन्दिपले दुई ओभरमै तीन विकेट लिए
मुम्बईविरुद्ध पहिलो ओभरमै विकेट लिए सन्दिपले
कस्तो रहला तपाईंको आज जेठ ६ गतेको दिन : राशिफल (२०७५–२–६)
वैशाख २४ गते सोमबार तपाईको आज : राशिफल (२०७५–०१–२४) सोमबारको दिन शिव भगवानको दर्शन गरौँ
बैशाख १६ गते आइतबार तपाईको राशिफल (२०७५–०१–१६) यी राशिहरुमा आज विषेश शुभ योग रहेको छ
वैशाख १८ गते मंगलबार तपाईको आज राशिफल (२०७५–०१–१८) मंगलबारको दिन गणेश भगवानको दर्शन गरौँ (ऊ गणेशाय नमः) मन्त्र पढ्नुहोस्
बुध ग्रहले ७२ वर्षपछि राशि परिवर्तन गर्दै, चम्किदैंछ यी राशिहरुको भाग्य
वैशाख २७ गते विहिबार तपाईको आज :राशिफल (२०७५–०१–२७) विहिबार को दिन भगवानको दर्शन गरौँ
वैशाख २१ गते शुक्रबार तपाईको आज राशिफल (२०७५–०१–२१) शुक्रबारको दिन भगवानको दर्शन गरौँ
बैशाख १५ गते शनिबार आज तपाईको राशिफल (२०७५–०१–१५) आज शनिबार यी राशिहुनेहरु लाई अत्यन्त राम्रो योग परेको छ
वैशाख १७ गते सोमबार आज तपाईको राशिफल (२०७५–०१–१७) सोमबारको दिन शिवको दर्शन गरि (ऊ नमः शिवाय) यो मन्त्र पढ्नुहोस्
वैशाख २० गते विहिबार तपाईको आज : राशिफल (२०७५–०१–२०) विहिबारको दिन भगवानको दर्शन गरौँ
बैशाख १३ गते विहिबार तपाईको राशिफल (२०७५–०१–१३) यी राशिहरुमा आज भाग्य चम्किदैंछ
गृहकार्य नगरेको निहुँमा कुट्दा विद्यार्थी गम्भीर घाइते
Raju Kaphle ४ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार ०६:५० May 18, 2018
Raju Kaphle ३० बैशाख २०७५, आईतवार ०४:१३ May 13, 2018
अनाथ बालबालिकालाई अध्ययन खर्चको समस्या
Raju Kaphle २९ बैशाख २०७५, शनिबार ०३:३१ May 12, 2018
विटुको ‘मायाको मात’ विमोचित
Raju Kaphle १७ बैशाख २०७५, सोमबार ०१:५५ April 30, 2018
Raju Kaphle ९ जेष्ठ २०७५, बुधबार ०६:०५ May 23, 2018
Raju Kaphle ६ जेष्ठ २०७५, आईतवार ०२:२४ May 20, 2018
कस्तो रहला तपाईंको आज जेठ ५ गतेको दिन : राशिफल (२०७५–२–५)
Raju Kaphle ५ जेष्ठ २०७५, शनिबार ०२:५० May 19, 2018
Raju Kaphle ८ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०८:५७ May 22, 2018
Raju Kaphle ४ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार ११:२० May 22, 2018
Raju Kaphle २९ बैशाख २०७५, शनिबार ०९:५५ May 14, 2018
Raju Kaphle २१ बैशाख २०७५, शुक्रबार ०३:१९ May 8, 2018
Raju Kaphle १७ बैशाख २०७५, सोमबार ०४:५७ May 1, 2018